30 daqiiqo si loo ogaado Nootropic Pramiracetam-AASraw
/blog/Gallery/30 daqiiqo si loo ogaado Nootropic Pramiracetam-AASraw
Posted on 03 / 07 / 2021 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Waa maxay Nootropic?
Ereygan waxaa loola jeedaa kiimikooyin dabiici ah ama dabiici ah oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan xirfadaha maskaxda. Waxay noqon karaan cunto supplements, xeryahooda synthetic, ama daawooyinka laguu qoro. Tusaalooyinka daawooyinka loo qoro nootropic waa Ritalin, kiciya loo isticmaalo daaweynta ADHD ama Memantine, daawo waallida.
Kordhinta garashada si kor loogu qaado caqliga, hal-abuurnimada, iyo dhiirrigelintu waa faa iido weyn jawiga maanta loo tartamayo. Waxaad maqli kartaa iyaga oo loo yaqaan "daroogo caqli badan" laakiin way ka sii badan yihiin intaas.
Ereyga nootropic wuxuu ka yimid asalka Griiga: "nous", oo micnaheedu yahay maanka, iyo "tropin", oo macnaheedu yahay leexasho ama foorar (sida webiga oo kale)
Tilmaamaha guud ee Nootropics
Isku darka kiimikada in loo tixgeliyo nootropic, waxay u baahan tahay inay buuxiso shuruudo gaar ah. Guud ahaan, nootropic la aqbali karo
Waxay kobcisaa xusuusta
Waxay hagaajisaa falcelinta walwalka
Waxay ka ilaalisaa maskaxda dhaawaca jirka ama kiimikada
Waxay hagaajinaysaa xakameynta kortikal / subcortical
Waxay leedahay sun hooseeya ama waxyeelo soo gaarta
Iskudhisyada isku dhafan ee soo raaca shuruudahan waa soo-saaris dhowaan, laakiin dhaqammada caafimaad ee qadiimiga ah ee Shiinaha iyo Hindiya waxay muujinayaan isticmaalka xashiishka, ginkgo biloba, iyo geedo kale sababahan awgood.
Waa maxay sababta Pramiracetam caan u tahay?
Pramiracetam waa qayb ka mid ah qoyska cunsuriyada, koox ka mid ah isku-dhafyada isku-dhafan ee wadaaga nukleus pyrrolidone. Daroogooyinka qoyskan ayaa ah kuwa lidka ku ah daawada lidka ku ah, xusuusta, iyo kuwa xoojiya xoojinta.
Pramiracetam waxay si togan u saamaysaa helitaanka xusuusta. Cilmi-baaristu waxay muujineysaa inay tahay neuroprotective. Si ka duwan daroogooyinka badan ee qoyska cunsuriga ah, waxtarkeeda waxaa lagu tijaabiyay dadka waaweyn ee caafimaadka qaba. Badanaa xeryahooda cunsuriyada ayaa lagu tijaabiyey waayeelka horeyba hoos ugu dhacay.
Waa nootropic awood leh oo leh saameyn muddo dheer socota oo dhisma waqti ka dib. Caddaymaha qaarkood waxay muujinayaan inay ka caawin karto dhaawacyada maskaxda ee dhaawaca ah.
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee Nootropic Pramiracetam.
Pramiracetam (N- [2- [di (propan-2-yl) amino] ethyl] -2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide, CI-879, Pramistar, Neupramir, Remen) waa nootropic dufan ku milmi kara fasalka cunsuriyada ee xeryahooda.
Pramiracetam (CAS: 68497-62-1) waxay muujisay inay wax ku ool u tahay daaweynta cilladaha garashada ee maskaxda iyo asalka naxdinta leh. Tijaabooyin laga qaaday bini-aadamka oo leh xusuus daciif ah ayaa muujisay in Pramiracetam ay awood u leedahay inay xoojiso xusuusta. In kasta oo aysan jirin daraasado cadeynaya in tani ay tahay xaalada bini aadamka caafimaadka qaba, inbadan oo ka mid ah ayaa laga soo sheegay inay dareemeen saameynta xusuusta oo fiicnaatay iyo xusuusta. Sharaxaad ku saabsan sababta Pramiracetam ay u xoojiso xusuusta, ayaa ah inay muujisay inay kordhineyso qaadashada choline-isku-xirnaanta sare.
Cilmi ahaan, Choline waa mecole horudhac u ah neurotransmitter acetylcholine, oo aad ugu eg fiitamiin waana nafaqo muhiim ah. Choline waxaa laga heli karaa dhirta qaarkood iyo xubnaha xoolaha ama caanaha. Lahaanshaha cunno isku dheellitiran oo sidaas ku filan oo ku filan oo loo yaqaan 'choline' oo ay weheliso cunsuriyadaha la isku daro sida Pramiracetam oo kordhiya qaadashada choline, waxay saameyn togan ku yeelan kartaa xusuusta.
Pramiracetam waa maadolele cunsuriyad lagu soo daray oo la mid ah qaab dhismeedka ay la mid tahay maaddada 'Piracetam' waalidka. Waxaa markii ugu horreysay la soosaaray 1984 si ay awood ugu yeelato inay ka hortagto amnesia oo ka timaad koronto. Marka la barbardhigo xubnaha kale ee qoyska cunsuriyada ah, Pramiracetam cilmi baaris yar ma leh laakiin waxay haysaa caddeyn waxtar u leh aadanaha.
Daraasadaha, Pramiracetam waxay umuuqatay mid wax ku ool ah markii laqaado waxyar kahor tijaabada taas oo kadhigi karta mid kufilan in lagu kabo inta lagu gudajiro imtixaanka tacliinta ama shaqooyinka wejiyadaha degdega ah halkaasoo hagaajinta xasuusta iyo garashada garashada ay anfacayaan. Daraasaadka bani'aadamku waxay taageeraan fikirkaan laakiin ma bixiyaan caddayn tirakoob oo ku filan ilaa maanta.
Pramiracetam Mashruuca Hawlaha
Sida cunsuriyadaha oo dhan, qaababka ka dambeeya pramiracetam si buuxda looma fahmin, ugu horreyn waxaa ugu wacan maqnaanshaha cilmi baaris ballaaran.
Si kastaba ha noqotee, daraasadaha hore qaarkood waxay tilmaameen dhowr ka mid ah farsamooyinka soo socda ee soo socda:
▪ Waxaa laga yaabaa inuu kordhiyo heerarka acetylcholine (iyadoo lagu kordhinayo qaadashada unugyada unugyada 30-37%);
▪ Waxay kordhin kartaa wax soo saarka nitric oxide ee maskaxda;
▪ Waxaa laga yaabaa inuu ku lug yeesho hormoonnada adrenal sida aldosterone iyo cortisol (corticosterone);
Si kastaba ha noqotee, xogta ku saabsan farsamooyinka kor ku xusan waxay ku dhowdahay gaar ahaan daraasaadka xayawaanka - inta badan jiirka iyo jiirka - sidaas darteedna gunaanad xoog leh lagama sameyn karo wali farsamooyinka suurtagalka ah ee pramiracetam ee maskaxda dadka isticmaala bini'aadamka caafimaadka qaba.
Pramiracetam waa a nootropic run ah, oo si gaar ah loo abuuray si kor loogu qaado garaadka. Faa'iidooyinkeeda iyo saameynteeda waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Pramiracetam waa xaqiijiye xoojiya xusuusta, si baaxad leh loo tijaabiyay dhowr iyo toban sano waxaana lagu muujiyay waxtar labadaba daraasaadka xayawaanka animal iyo tijaabooyinka bukaan socodka ee dhalinyarada qaangaarka ah ee leh cillad garasho xagga maskaxda ah.
Pramiracetam waxay hagaajineysaa xusuusta labadaba iyadoo kicinaysa hippocampus, qeybta maskaxda ugu horeyn mas'uul ka ah abuurista xusuus cusub iyo iyadoo udhaqmeysa sidii amnigis anti ka hortag ah oo yareynaya hilmaanka. Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa sidoo kale soo sheegaya horumar la taaban karo oo ku yimid xawaaraha soo celinta, sheegashadaas oo ay xaqiijiyeen daraasaadka xoolaha
Awood fara badan iyo Awood waxbarasho oo kordhay
Sumcadda Pramiracetam ee ah kobciyaha guud ee garashada ee kordhiya feejignaanta isla markaana ballaadhisa awoodda barashada ayaa ka dhigtay xulasho caan ah ardayda rabta kaalmo waxbarasho oo la isku halleyn karo.
In kasta oo aan wax daraasad bini'aadam ah oo ku saabsan saameyntan gaarka ah aan la diiwaangelin, daraasadaha xayawaanku waxay muujinayaan in pramiracetam ay gacan ka geysato farsamooyinka aasaasiga u ah barashada iyo hagaajinta xusuusta iyadoo la kordhinayo nuuca neerfaha ee nitric oxide synthase (NOS) ee hippocampus. balaastigga, oo labaduba muhiim u ah dhammaan dhinacyada garashada.
Pramiracetam waxaa sidoo kale loo yaqaanaa inay kordhiso qaadashada choline-sare ee hippocampus, sidaas darteed waxay si aan toos ahayn u sii hurineysaa wax soo saarka acetylcholine, neurotransmitter muhiim ah oo si xoog leh ula xiriira barashada iyo garashada
Tijaabooyinka calaamadaha furan ee bukaanada qaba asaasaqa asaasiga ah ayaa muujinaya in Pramiracetam ay si wax ku ool ah u beddeshay amnesia, si weyn kor ugu qaadista xusuusinta iyo yareynta illowga.
Daraasado kale, oo lagu cabiray saameynta pramiracetam iyo noocyada kale ee cunsuriyada nootropics ee bukaanka qaba jahawareer fudud ama dhexdhexaad ah, waxaa jiray horumarin lagu qiyaasi karo garashada iyo xusuusta. Natiijooyinkaan waxaa suuragal ah in loo sharraxo, ugu yaraan qayb ahaan, kor u qaadista nootropic ee neurotransmitters-ka jira.
In kasta oo pramiracetam aan loo oggolaan sida daaweynta Alzheimer ee Mareykanka, haddana sida caadiga ah waxaa loogu qoray Yurub si loogu daaweeyo waallida iyo arrimaha kale ee garashada la xiriira cudurka Alzheimer iyo xanuunnada kale ee neerfaha.
In kasta oo aysan jirin cilmi-baaris dukumiinti ah oo ku saabsan saameynta pramiracetam ee ku-habboonaanta bulshada, adeegsadayaal badan ayaa soo sheegaya inay ka dhigeyso iyaga wadahadal badan oo hal abuur leh iyo ku-hadal bulsho. Saameyntan waxaa lagu sharxi karaa, ugu yaraan qeyb ahaan, saameynta shucuurta shucuurta pramiracetam, ‍oo mararka qaar lagu tilmaamo inay la mid tahay tan Ritalin. Saameyntani waxay yareyn kartaa welwelka bulshada iyo, markaa, waxay sare u qaadaysaa ku hadalka bulshada.
Pramiracetam waxaa loo yaqaanaa inay leedahay saameyn badan oo neerfayaasha ah, oo awood u leh inay hagaajiso garashada aadanaha ee la soo dersay dhaawac maskaxeed.
Daraasaduhu waxay sidoo kale muujiyeen inay leeyihiin saameyn neuroprotective ah oo muuqda marka la isticmaalo inta lagu jiro qalliinka wadnaha iyo daaweynta cilladaha garashada ee asalka maskaxda.
Pramiracetam Qiyaasta Tixraaca
Pramiracetam caadi ahaan waxay ku timaadaa qaab budo ah, kaabsollo horay loo sameeyay, ama kiniinno. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa soo sheegaya in foomka budada uu leeyahay dhadhan xun oo aan fiicnayn, sidaas darteedna ay doorbidaan inay isticmaalaan kaabsulka ama foomamka kaniinka halkii ay ka isticmaali lahaayeen.
Sida laga soo xigtay cilmi baarayaasha qaarkood, foomamka budada iyo kaabsalka ah waxay yeelan karaan xaddiga nuugista oo ka dhakhso badan qaabka kiniinka. Si kastaba ha noqotee, awoodda iyo waxtarka guud ayaa la rumeysan yahay inay qiyaas ahaan u dhigmaan dhammaan noocyada kala duwan.
Mid ka mid ah tijaabooyinka yar ee ilaa hadda la qabtay, qiyaas dhan 1,200 mg ayaa la isticmaalay, oo loo qaybiyay laba 600-mg ah ama saddex 400-mg qaadasho ah oo ku faafay maalintii oo dhan.
Sida xubin ka mid ah qoyska cunsuriga ah ee daroogada, pramiracetam waxaa la rumeysan yahay inay ku tiirsan tahay choline saameynteeda, isticmaalkeedana waxaa laga yaabaa, sidaas darteed, inuu yareeyo sahayda jirka ee jirka. Sababtaas awgeed, waxaa mararka qaarkood lagula taliyaa in la isku daro racetams iyo isha choline, sida alfa-GPC ama citicoline. Si kastaba ha noqotee, soo-jeedintaani waxay ku saleysan tahay oo keliya xog laga soo qaatay hal daraasad oo xayawaan ah, marka tan looma fasiran karo nooc ka mid ah talo-bixinno “rasmi ah” ama “caafimaad ahaan la ogol yahay”.
Macluumaadka Muhiimka ah: Pramiracetam dhoobo
Pramiracetam sifiican ayuu u shaqeeyaa kaligiis laakiin sidoo kale wuxuu noqon karaa mid awood badan u leh nootropics kale, kordhinta waxtarkooda. Waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay cunsuriyada kale, taasoo ka dhigeysa mid dabiici ah oo lagu daro inta badan nootropic xirmooyin.
Ku darista choline dhamaystirid ilaa isku-darka pramiracetam wuxuu yeelan karaa faa'iidooyin badan. Kaliya maahan inay xoojiso saameynta pramiracetam, laakiin sidoo kale waxay ka hortagi kartaa madax xanuun, kuwaas oo ah kuwa ugu badan ee la soo sheego saameyntooda.Sababtoo ah pramiracetam waxay leedahay saameyn noocan oo kale ah, waxaa lagugula talinayaa inaad iskeed u isticmaasho muddo tijaabo ah kahor intaanad ku darin nootropics kale .
2 tusaale oo kusaabsan Pramiracetam yaryar:
❶ Pramiracetam iyo Oxiracetam Stack
Ku dhajinta pramiracetam oo leh tamar kobciye sida adrafinil ama oxiracetam waxay xoojin kartaa feejignaanta maskaxda waxayna ku dheereyneysaa muddo dheer.
Pramiracetam iyo Aniracetam Stack
Ku dhajinta pramiracetam oo leh wakiil ka hortagga walwalka sida aniracetam ayaa siin kara dadka isticmaala diiradda iyo feejignaanta iyadoo la wanaajinayo niyadda iyo yareynta dareenka culeyska maskaxda iyo walwalka. Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa sheegaya in xirmadan ay kor u qaadeyso ku-hadalka bulshada ayna wanaajineyso awooddooda waxqabad ee dadweynaha.
Saamaynta Dhinacyada Pramiracetam
Pramiracetam badanaa si fiican ayaa loo dulqaataa xitaa qiyaasta sare, iyo waxyeelo aad u yar oo aan fiicnayn ayaa la diiwaangeliyey.
Waxaa jira warbixino aan badnayn oo ku saabsan waxyeelooyinka yar yar iyo kuwa ku-meel-gaadhka ah, oo ay ku jiraan madax-xanuun, calool-xanuun caloosha ku jira, iyo dareenno isku-buuqsan ama kacsan.
Madax xanuun la xidhiidha hoos u dhaca ku dhaca choline waa saamayn caadi ah oo noocyada cunsuriyada nootropics ah waxaana laga hortagi karaa iyadoo la qaato pramiracetam iyadoo lala kaashanayo choline dheeri ah.
Pramiracetam waa mid aan balwad lahayn, mana lahan wax saameyn ah oo waxyeelo leh oo isticmaalka muddada-dheer ah. Waxaa jira caddeyn in pramiracetam xitaa laga yaabo inay kobciso caafimaadka maskaxda iyo xitaa soo celinta shaqada maskaxda gabowda.
Meeday Meesha ugu Fiican ee Iibsasho Pramiracetam Online?
In kasta oo ay run tahay in Piracetam uu yahay mid ka mid ah nootropics-ka rajo-gelinta leh, haddana wuxuu leeyahay oo keliya daraasado caafimaad oo aad u tiro yar, badankooduna, haddaanay taariikhaysnayn, waa daraasado ku saleysan xayawaan iyo cilmi-baaris. Faa'iidooyinka waa kuwo cajiib ah Waxay faa'iido u leedahay dadka waayeelka ah ee maskaxda naafada ka ah laakiin sidoo kale waxaa lagula talinayaa in ay qaataan carruurta iyo dhalinyarada qaangaarka ah ee la xiriirta baahidooda.Waa badbaado in la isticmaalo inta ugu waxtarka badan kaliya marka la isku geeyo kuwa kale nootropics.
Waxaa jira meelo badan oo ay leeyihiin Piracetam for sale online. Si kastaba ha noqotee, waxaa ugufiican in laga iibsado degel buuxiya heerarka tayada ee arimahan. AASraw waa shirkad lagu kalsoonaan karo oo nootropics ah, waxsoosaarkooda oo dhan waxaa lagu soo saaraa hoosta cGMP oo tayada waa lala socon karaa wakhti kasta, illaa inta aan ognahay. Waad ka fiirsan kartaa iyaga haddii aad rabto inaad iibsato budada Pramiracetam.
Waxaa sida ugu wanaagsan looga iibsan karaa iibiyahan. Waxay ku iibiyaan xeryahooda kalsoonida leh CoA iyo markab caalami ah. Sida dawooyinka kale, dukaamada qaar ayaa laga yaabaa inay u baahdaan warqad dhakhtar ka hor intaadan iibsan. Qiimaha Piracetam sidoo kale way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran goobta.
 Shaqaalaha, Xaashida Casaanka. Meey 27, 1991 Cambridge Neuroscience Horumarinta Warner-Lambert's Pramiracetam
 Magacaabista Maandooriyaha Agoonta ee FDA iyo Ansixinta Bogga Xogta la helay Ogosto 2, 2015
 Drugs.com Drugs.com Liisaska caalamiga ah ee loogu talagalay bogga pramiracetam ee la helay Ogosto 2, 2015
 Auteri et. al. Joornaalka caalamiga ah ee cilmi baarista dawooyinka daaweynta, 12 (3), 129-132 (1992-1-1)
 Khibrad u leh adeegsiga pramistar, diyaarinta nootropic cusub, ee daaweynta ciladaha xusuusta ee bukaanada qaba cudurada wadnaha maskaxda. 2003 Dec.
 Codsiga wakiilada nootropic ee daaweynta qalafsan ee bukaanka maskaxda ka wareersan. 2008 Meey 30.
“Isha Isha Dhalinyarada”: NAD + & NMN oo ah Kaabis Curcumin Derivative J-147 Treat AD, Anti-gabowga, Cudurka Murugada (MDD)